uwoyela Zokwenziwa has umehluko omkhulu kusukela amaminerali. Lesi sakamuva ikhiqizwa petroleum futhi ingenye imikhiqizo yayo ziphuzo zazihluzwa, kanye, isibonelo, uwoyela fuel, itiyela, iziketekete diesel, asphalt, uphethiloli. uwoyela Zokwenziwa is umqondo kusuka ethylene. Le ngxube ikhiqizwa uwoyela ongahluziwe noma igesi yemvelo. Kumele kuqashelwe ukuthi le nqubo kudinga isikhathi esiningi namandla izindleko. Yingakho zokwenziwa uwoyela kuyabiza kakhulu kunalezo amaminerali. Ingxenye yokuqala kuba esinembile, elibangela lesi izakhiwo ezingcono kweyesibili.
Zokwenziwa 5w40 uwoyela, isibonelo, has okusezingeni eliphezulu ukuzinza ezishisayo futhi amakhemikhali. Lesi sakamuva libhekisela ukungabi olubonakalayo iyiphi ukuguqulwa impahla (namachibi, isibonelo) ngesikhathi ukusebenza kwe-motor. ukuzinza Thermal abizwa ngokuthi nokugcinwa viscosity ezingeni elithile phezu ububanzi lokushisa ububanzi. Le nkomba ihlinzeka ephephile injini ukuqala kubanda. Ngaphezu kwalokho, lo ukuzinza ezishisayo lamafutha kuqinisekisa aphakeme lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela motor e ephezulu lokushisa zigaba at imithwalo eliphezulu kanye ngesivinini.
uwoyela Zokwenziwa (PW) kuyahluka Ukwakheka ekhethekile yamangqamuzana, by okuyinto wanikeza okusezingeni eliphezulu Ukungena ikhono kanye fluidity. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngaleyo ndlela injini oiling kuthatha imizuzwana akukho engaphezu kwamashumi amane noma amahlanu. Ukusetshenziswa izinto amaminerali, inqubo at okushisa aphansi kungase kuthathe eziningi eziningana imizuzu.
uwoyela Zokwenziwa kuyahluka viscosity okusezingeni eliphezulu Inkomba, okwenza kungabi ukuncika lokushisa ekushintshashintsheni. Lokhu kungabi nesidingo izithasiselo. Basuke ezidingekayo ukuvimbela ukuguqulwa lamafutha emanzini, ngaphandle ekuthuthukiseni izindawo lubricating, njengoba, ngokwengxenye enkulu, isikebhe sizinze.
amafutha Zokwenziwa ifa flowability ezinhle ngaphansi kwamazinga ahlukahlukene okushisa. Ukusebenzisa kwabo inikeza sakugcina ukumelana yangaphakathi ukuze Ukujikeleza e motor, nakho kwandisa umthamo futhi kunciphisa petrol.
uwoyela Zokwenziwa inikeza engcono Ukungena ikhono. Lokhu kunciphisa bafake izingxenye, kukhuphuke fuel Umnotho, ikakhulukazi phakathi iphelela esifushane futhi siqala abandayo njalo.
amafutha Zokwenziwa ukunikeza okuhlala isikhathi eside ifilimu kumiswa Laphezu izingxenye ngaphansi ukuhilizisana. Lezi izinto futhi ube okusezingeni eliphezulu detergency futhi dispersancy izakhiwo. Amafutha amavesi futhi ngaphakathi injini uqobo zihlanzekile. Laphezu kwangaphakathi kungekho ezifakwa ukuthi kukhona isici Izingxube amaminerali. KULETHA abahlukahlukene okuyinto akhiwa ngesikhathi ukusebenza injini, kuthiwa ziyoncibilika amafutha. Lokhu kuvimbela ukungcola izinhlayiya elikhulu, okuyinto ngesivinini bafake motor.
Inzuzo ebalulekile zokwenziwa uwoyela ubhekwa kakhulu ukumelana ukuguga. Ngakho, isikhathi esikhundleni luyanda.
Jwayelekile ukuvuza samanje imoto. Indlela hlola wamanje ukuvuza ku multimeter imoto? Ukucinga nokuqeda ukuvuza samanje imoto
Indlela understate "Priora" ngezandla zakhe? Indlela ukunciphisa ukuphakama Ukugibela ngu "Priore"?
Emibi imoto egcekeni, yini okufanele uyenze? Okufanele ukwenze uma imoto yakho emibi egcekeni?
Indlela yokukhanyisa umhluzi? Sifunda!
Zonke enrages futhi luthinta zonke: ukuthi benzeni, izizathu njengoba ekulinganiseni isimo esingokomzwelo futhi sibhekane ngokuphumelelayo ukucasuka
Eziphawula elingenamikhono izingalo kanye ifulege waseFrance
Sea Port Olya
Ukwamukelwa Simemetelo State Ubukhosi yeRussia. Juni 12 - leli holidi isimo Russian Federation
Ihembe jeans - zabuna emadolobheni
Yini ukondla hamsters ekhaya? Indlela ukhule ube eside eziphilayo?
Indlela ukuxhuma umbhobho kwikhompyutha yakho: amathiphu namasu
Yini okudingeka uyenze umsebenzi ukuze ngehlise umzimba? Cardio futhi abanye amandla